Ogaden News Agency (ONA) – Qaybtii 2-aad Gibir, Gidhaash & Gubbo waa erayada gumaysiga Ethiopia laga dhaxlay. W/Q Xarbi Aden
Qaybtii 2-aad Gibir, Gidhaash & Gubbo waa erayada gumaysiga Ethiopia laga dhaxlay. W/Q Xarbi Aden
Sidii aan horay idiin ku ballan qaaday qoraalkan hoose waa qaybtii ugu danbaysay ee maqaalkii uu ciwaankiisu ahaa, Gibir, Gidhaash & Gubbo waa erayada gumaysiga Ethiopia laga dhaxlay.
Gibir:- Waa Canshuur aan sharci ahayn, xadidnayn, cadaalad & nidaam midna aan salka ku hayn oo laga qaado dad xoog lagu haysto, lana cadaadinaayo si loo laylyo ama loo qabjabiyo. Inta laga warhayo ururinta gibirka waxaa ka sinaa dhamaan boqortooyinkii kala duwaanaa ee xabashida & nidaamyadii ka danbeeyay ee soo maray Ethiopia.
Sidaan ku xusay Qormooyinkii aan ciwaanka uga dhigay Sooyaalkii dhulbalaadhsiga Xabashida (Riix halkan) ee hadda ka hor aan baahiyay, markii ciidankii boqotooyadii Mililikh II uu batay waa kii u jaheeyay dhulbalaadhsiga iyo boobka bulshooyinkii ku hareeraysnaa, Ciidankan ayaa kula dhaqaaqay bulshooyinkii ay qabsadeen ficil dhac iyo qarbud ah “Gibir“.
Xukumadii kala jaadka ahaa ee soo maray taariikhda Ethiopia iyo tan hadda jirtaa waxay ahaayeen kuwo sabool ah oo ciidan aad u badan uruursada, maadaama ay dhul baadhsi iyo dagaal ku joog ahaayeen. Si ciidankaas ay ugu helaan Saad waxay ku dhaqaaqi jireen dhanka shacabka ama bulshooyinkii ay dhulbalaadhsiga ku qabsadeen, oo ay ka soo uruurin jireen hanti isugu jirta mood iyo nool. Marka laga reebo MililikII oo ciidankiisu si safbalaadhan ah u urursan jiray Gibirka xukuumadahii ka danbeeyay waxay lahaayeen ciidan gaar ah oo loogu tala galay xaalufinta shacabka tabarta yar (Gibir ururinta) ama kuwo la shaqeeya ciidanka qaranka oo hor qaada si ay uga soo ururiyaan shacabka gibir. Wakhtiyadii Xayle Silaasse waxaa u qaabilsanaa ururinta gibirka/ku gadh qaadka askartii xayle ciidan koofiyad dhuub ay soomaalidu u taqaanay, xiligii dhargida waxaa u qaabilsanaa xukuumadaas ururinta gibirka/ ku gadh qaadka shacabka shacabka ciidankii dhargida ciidan la odhan jiray mahbarka, Haddana waxaa jirta marka laga reebo ciidamada badan ee kala jaadka ah ee ay leedahay Ethiopia ee siyaalaha kala duwan u dhaca hantida shacabka Ciidanka layidhaahdo Faynaansi oo aad u tiro badan, si gaar ahna u qaabilsan ururinta gibir iyo la wareegida hantida shacabka.
Gibirka oo si toosa uga bilaabay dhulka Ogadeenya wakhtigii boqortooyadii dhulboobka ku caan baxday ee MelilikII oo aan ku sheegay qaabkii iyo goortii ay soo gaadheen ogadeenya maqaallada aan sare ku xusay, Laakiin eraygan waxaa ugu daraa oo ay cidkasta ficilkiisa baratay markii wadanka uu qabsaday dhiigyacabkii boqor Xayle selaase. Sellaase waxaa uu kusoo rogay soomaalidii dhaqatada ahayd ee ku dhaqnayd ogadeenya in ay bixiyaan Gibir, isagoo u sameeyay ciidanka aan sare ku xusay iyo kuwii qaranka ethiopia oo isku dhafan oo wareegi jiray qarfaha/dhulka miyiga, si ay uga soo ururiya dhamaan bulshada Bar iyo Beer waxay haystaan. Ciidankii gumaysigii xalaye sellaase isu kala qaybin jiray miyi, magaalo, iyo beero, waxayna fadhiisan jiray goobaha laga cabo, sida Ceelasha,Barkadaha si xoolaha ku soo aroora ay uga kaxaystaan gibir. Soomaalida ayaa wakhtigaas khaati ka istaagtay sidii dhaca ahayd ee looga qaadayay hantidaas gibirka loogu yeedhay.
Gibirku ma ahayn wax ku kooban soomaalida ee waxaa laga qaadi jiray dhamaan bulshooyinkii hoos imaan hayay xukunkii makraas jiray. Inta badan waxaa lagu xasuustaa in ay dadka la baqan jireen xoolaha ayna marba deggaanka ciidanka ururiya lagu sheego moyeen daggaanno kale u hayaami jireen. Ciidanka gumaysiga ethiopia ee wakhtigan ayaa dhabahii qarbudka iyo dhaca ahaa ee ay jeexeen xukumadii ka horeeyay ku taagan, waxayna wakhtigan sayladaha, ceelasha, barkadaha iyo goobayaha xoolo daaqeenka ah dhigeen ciidan soo ururiya gibir. Waxaa xusid muddan in shacabka ogadeenya ay saarantahay cuna qabatayn sharci daro ah oo gumaysiga ethiopia uu ku soo rogay sanadkii 2007-dii. Qiimaha waxyaabaha aas aaska nolosha ah ayaa gaadhay heer aan horay loo arag/maqal. Sidoo kale ciidanka ethiopia ayaa la wareega waxakasta oo hanti ah oo ka soo galaya dhanka soomaaliya oo u soo gacan gala.
Gubbo:- ( Gunno) waa hanti qaab musuq ah lagu bixiso si hawl aad qof xaq u lahaa loogu dhameeyo ama dadka ka xidhan loogu sii daayo ama jago loogu raadsado. Eraygan ayaa waxaa uu ka mid yahay kuwa caanka noqday isagoo ficilkiisa mooyeen fasirkiisa aan aad loo aqoon kuna dhex faafay bulshada soomaaliyeed. Intii xabashidu dhulka ogadeenya soo caga dhigatay waxay la kowsaday in ay dadka ka qaadaan lacag ama hanti kale oo musuq ah markii ay hawl rabaan in loo dhameeyo. Arintan oo ku baahday dhulkan ayaa waxay dhaqan u noqotay maamuladada gumaysigu meegaaray ee Jigjiga hadhsan haya. Qodobkan oo aad u balaadhan ayaa waxaan kusoo koobi lahaa maamulada ka jira degmada ilaa midka madaxwaynaha ah waxay ku joogaan Bixinta gubada iyo baabi’inta dadka. Maamuladan ayaa waxay mushaarkooda, miisaanida horumirineed, canshuuraadka, Raashinka gargaarka ah ee caalamku geeyo dhulkaas ay u gacan galiyaan intooda badan Saraakiisa Ciidanka Ethiopia horjoogayaasha u ah, Si ay xukunkan indhaha iyo dhagaha la’ ugu nagaadaan maalmo.
Ciidanka Ethiopia ayaa qaabaysan qaybta saadka, qaybta siyaasada(sahanka & wardoonka ) iyo qaybta difaaca., Qaybahan ayaa kala leh saraakiil siyaalo kala duwan u hogaamiya oo iyaga oo ciidanka ka wada tirsan hadana saraakiil kala jaad ah hoos taga. Saraakiishan oo kala awooda ah ayaa mid kasta waxaa uu u baahan yahay in si gooni ah loola kulmo, loo barto, loogu xidhnaado gubbo u gooni ahna la siiyo. Dhanka kale dadka shacabka ah ee ka buuxa jeelasha ayaa ehelkooda ay ciidanka gumaysiga ethiopia iyo kuwa la jeelka ahi kaga qaataan lacag/gubo ah, iyadoo loo sheegi in la sii dayn ama jeelka loo badali ama si ruuxu ehelkiisu ay u arkaan.
Gidhaash;- Nin magaciisu uuna maankayga ku jirin ayaa laga wariyay ” dadka ogadeenya ku nool waxaa ugu ayaan daran Ninkii gabadh dhalay, kii guri dhistay iyo kii gaadhi iibsaday oo way wada gidhaashan yahiin“!. dad wadamo xor ah ku nool oo gumaysiga ethiopia u gidhaashana way jiraane! gidhaash waa qasab/ ama xoog ku kaxaysasho. Maalinkasta waxaad maqashaan ama la arkaa hebel oo dirawal ah ayay ciidanka ethiopia dileen, hebel oo dirawal ah ayaa dagaal dhex maray ciidanka ethiopia iyo jabhada ku dhintay, hebel oo Ambulance waday ayaa la dilay iyo habel oo booyad waday ayaa dagaal ku dhintay! Hadal aan caqligu keeni karin ma u egyahay kaasi? meeriskan ayaa ka mid ah gabay uu tiriyay Abwaan fajacay, Waa kuwo aan ka daadagayn qof aan makhraati ka ahayn dhacdooyinkan. Inta ogadeenya joogta way ogyahiin siday u dhintaan, dadka ogadeenya ka maqan xog intee la eg ayay ka haystaan sida ay ku dhintaan dhibanyaashani? Dirawalada/wadayaasha baabuurta waxay ka midyahiin dadka ugu dhimashada badan ogadeenya ee xabadi disho. iyadoo ay sabab u tahay ciidanka ethiopia oo ula dhaqma si naxariis daro ah. Ciidanka ethiopia ee ku sugan ogadeenya ma haystaan baabuur ku filan oo ay ku socdaalaan ama ay ku qaataan sahayda, si ay hawlgaladooda dagaal ee ay ka wadaan ogadeenya u meel mariyaan, waxay xoog ku kaxaystaan gawaadhida shacabka.
Ficilkan xoog ku kaxaysiga ah ayaa loo yaqaan gidhaash. Gaadhi raran oo u socda magaalo kale ayay laba wiil oo ciidanka ethiopia ka tirsan intay shirka u galaan ay u jeexsiiyaan xerada ciidanka ee ku taala magaalada, waxayna ku amraan dadka iska leh hantida saaran baabuurka in ay ku dajiyaan xerada ciidanka. Shaqsiyaadka iska leh hantida oo laga yaabo in ayna kasoo jeedin magaalada lagu qabsaday ayaa u yeedha xamaaliin oo ka dajiya hantidii saarnayd baabuurka kharash ayna ku talagalin/qaarna lagama yeelo inay ka dajistaanba oo way ku gidhaashtaan/ku kaxaystaan, Agabka saaran baabuurka ayay ku dajiyaan meel daleed ah oo qoraxda iyo roobka waxba ka saarayn, waxaana soo gaadha khasaarooyin baayacaamushtarka iska leh.
Ciidanka gumaysiga ethiopia hadii baabuurku uuna ku filayn waxay la sugaan baabuur kale oo soo mara magaalada, inta ay ka helayaana waxaa uu ugu xayirnaadaa baabuurka ay gidhaasheen Kaamka ay ka daganyahiin magaalada. Maalinta ay juq u soo dhahaan baabuur kale oo warmooge ah ayay ku darsadaan. Hadii ay sugi waayaana waxay la xidhiidhaan ciidanka ka kale ee ku sugan magaalada ugu dhaw, si hadii baabuur yimaado ama ay gidhaash ku haystaan ciidankaasi baabuur kale ay ugu soo gacan galiyaan. Markii ay u gaadho tiradii baabuur ee ay baahnaayeen ayay ula dhaqaaqaan meeshii ay markaas u jeedeen iyaga oo aan shidaal ku shuban. Waxii la sii socdaba waxaa la arkaa in ay jabhadu dhexda u gasho, markii ay aragto ciidan xabashi ah oo ka buuxa baabuurka ay baasuuke ku dhufato deetana uu waxii saarnaa oo dirawalkii lasoo gidhaashay ku jiro ku basbeelo. Sidoo kale waxaa dhacda in baabuurka uu shidaalku ka dhamaado ayna goob cidla ah ciidanka ethiopia kaga tagaan dirawalka iyo baabuurkiisa oo aan biyo iyo baad toona haysan, uuna maalmo u jiifo goobtaas cidlada ah isaga oo ku sugaya bal in maalin uun baabuur soo maro, si uu caagad jidaal ah uga dhibcisto ama uu u sii raaco, si lafahiisa uu magaalada u geeyo. Gooro badan waxaa dhacday in ay ku xanaaqeen ciidanka gidhaashay dirawalka shidaalku ka dhamaaday oo ay xabad ku dhufteen, ayna maydkiisa kaga tageen goobtaas bacadka a, sidoo kale waxaa dhacada markii ay ka dhamaystaan hawshooda iska soo dayn mahayaane waxay ku wareejiyaan ciidanka oo iyaguna sidaas oo kale ugu baahan, oo intii in la eg iyo ka daran mariya dirawalka iyo baabuurkiisa. Tusaalle:- Dirwal laga soo gidhaashay feerfeer ayaa wadanka oodhan gidhaash ku soo wareega ilaa ugu danbayn ciidanka feerfeer uu kusoo hoydo.
Ciidanka gumaysatada ethiopia ayaa gidhaasha dhamaan gaadiidka, sida booyadaha, gaadiidka xamuulka, kuwa dagmooyinka, gawaadhiga gargaarka dag daga ah, kuwa hay’adaha, awrta iyo dameeraha. Waxayna la qaybsadaan gaadiidka iyo dadka iska leh waxay ciidanka gumaysigu mutaan. Dirawaliin badan oo ay kolal badan oo hore gidhaasheen ciidanka gumayisgu ayaa isku daya in ay baxsadaan, iyagoo og in ayna u turayn ciidanka gumaysigu ayay hadana horay u dhaqaaqaan markii ay arkaan in la gidhaashayo. Ciidanka gumaysigu waxay ku boobaan rasaas baabuurka, iyagoo aan u aabo yeelayn shacabka iyo hantida baabuurka ka buuxa, waxayna goobta ku dilaan dirawalka iyo shacabka saaran baabuurka.
W/D Xarbi Aden